Mashiinka loo yaqaan 'Fluidized-bed Jet mill' ayaa runtii ah aalad noocaas ah oo adeegsanaysa qulqulka hawada xawaaraha sare ku socda si ay u fuliso nooca superfine qalalan ee jajabaya. Ku wadida hawo cadaadis leh, walxo cayriin ah ayaa loo dardargeliyaa isgoyska afarta nozzles si loo saameeyo loona shiido hawada kor u socota ee aagga wax shiidaya
Mashiinka loo yaqaan 'Fluidized-bed Jet mill' ayaa runtii ah aalad noocaas ah oo adeegsanaysa qulqulka hawada xawaaraha sare ku socda si ay u fuliso nooca superfine qalalan ee jajabaya. Ku wadida hawo cadaadis leh, walxo cayriin ah ayaa loo dardargeliyaa isgoyska afarta nozzles si loo saameeyo loona shiido hawada kor u socota ee aagga shiidaya, saameyn ku yeesho
Sare u kaca heer kulka: heer kulka ma kordhin doono maadama qalabka lagu jajabinayo xaaladaha shaqada ee balaarinta pneumatic iyo heerkulka godka soodhaweynta waa caadi.
Jet Mill oo loo adeegsaday shaybaarka, oo mabda'diisu ku salaysantahay mabda'a sariirta dareeraha ah Jet Mill waa aalad sida isticmaalka xawaaraha xawaaraha sare ku socda si ay u fuliso nooca superfine qalalan ee jajabaya. Badarka waxaa lagu dedejiyay qulqulka xawaaraha sare ee hawada.
Nooca cajaladda (Ultrasonic / Pancake) Jet Mill. Mabaadi'da Hawlgalka: Ku wada hawo hawo cufan iyadoo la adeegsanayo irbadaha quudinta material alaabta ceyriinka ah waxaa lagu dedejinayaa xawaaraha ultrasonic waxaana lagu durayaa qolka shiilista ee jihada la taaban karo, way isku dhacayaan oo lagu shiiday walxaha.
Nidaamka millatariga kahortaga Nitrogen wuxuu isticmaalaa gaaska Nitrogen sida warbaahinta loogu talagalay macdanta sambabaha si loo sameeyo qashin-qubka qalafsan.
Jet Mill loo adeegsaday shaybaarka, oo mabda'a uu yahay: Lagu wado hawo la cadaadiyey iyada oo loo marayo quudinta irbadaha material alaabta ceyriinka ah waxaa lagu dardar geliyaa xawaaraha ultrasonic waxaana lagu duraa qolka milling ee jihada la taaban karo, isku dhaca oo lagu shiiday walxaha.